Kubernetes 1.14 inosvika iine chiwedzerwa chekutsigira Windows midziyo | Linux Vakapindwa muropa
Kubernetes ndeye yakavhurika sosi sisitimu yekugadzirisa iyo kuendesa, kuyera, uye manejimendi emidziyo yekushandisa.
Pakutanga yakagadzirwa neGoogle, kuvandudzwa kwayo kwakapihwa kune yakavhurwa sosi dhatabhesi yeCloud Native Computing Foundation (CNCF), iyo inogonesa tekinoroji yemidziyo kukura nekukurumidza mukukura, nekuda kwemipiro yezvigadzirwa zvehunyanzvi (senge AWS, Oracle, IBM, Microsoft, Alibaba, uye VMware) nemamwe makambani makuru.
Kubernetes ine zvikamu zviviri zvakakosha:
seti yematenzi node anoita seanodzora ndege
seti yenzvimbo dzinoshanda seyemhando dzebasa dzinomhanyisa dzakawandisa basa
Kana yakawanda-yemidziyo basa rekutakurirwa rikatumirwa kuKubernetes, chirongwa chekutonga chinosarudza imwe kana dzinopfuura nzvimbo dzevashandi kuti vagamuchire midziyo.
Nhasi, timu inoona nezvekuvandudzwa kwayo yakaita chiziviso chekuwanikwa kweKubernetes 1.14 iyo inosanganisira 31 yekuvandudza.
Of which zvinoratidzwa mune iyi vhezheni zvinokwanisika uye kutsigirwa kweakawanda mabasa muKubernetes, iine zvinhu zvitatu zvakakosha zvinoenda kune kuwanikwa kwakawanda uye kwakakosha kuchengetedza mashandiro achienda kune beta.
Pakazara, kuburitswa kunosanganisira 31 zvinowedzera: 10 izvo zvino zviri kuburitswa kwakatsiga, 12 mubeta, uye nomwe nyowani.
1 Chii chitsva muKubernetes 1.14
1.1 Tsigira zvinowedzera muKubernetes 1.14
Chii chitsva muKubernetes 1.14
MuKubernetes 1.14 kubectl zvinyorwa zvakanyorwa zvekare nekutarisa pane zviwanikwa manejimendi uchishandisa kudonhedza sosi yekugadzirisa.
Iyo inowanikwa sebhuku rine chinongedzo kune chikuru Kubernetes zvinyorwa. Kune zvakare logo yebectl uye mascot anonzi kubee-cuddle.
Zvakare kucherechedzwa kubva kuKubernetes 1.14 chiziviso icho hunhu hwekuzivisa yeYAML yekumisikidza chishandiso yekumisikidza zvigadziriso ye kustomize inowanikwa mubectl uchishandisa iyo -k mureza wekuraira maitiro ekushandisa.
Tsika inobatsira vashandisi kunyora uye kushandisa zvekare Resource Config uchishandisa zvechivanhu Kubernetes pfungwa. Zvinyorwa zvezvinhu izvi zvitsva zvinowanikwa.
Iyo kubectl michina yave kuwanikwa mune yakagadzikana vhezheni. Inobvumira vanogadzira kushambadzira yavo yavo tsika kubectl subcommands semabhainari akapatsanurwa
Mavhoriyamu emuno anoramba aripo iye zvino ari mushanduro yakagadzikana. Ivo vanoita yemuno yakanamatira kuchengetwa kuti iwanikwe seyakaenderera vhorumu sosi
Maitiro IDs (PIDs) shanduko kuenda beta. Mhinduro iyi inobvumira manejimendi kuti ipe pod PID kune pod kusarudzika nekumisikidza kuisa huwandu hwePIDs pane pod. Imwe yekuwedzera alpha chimiro kugona kuchengetedza huwandu hwePID dzakapihwa Mushandisi Pods.
Tsigira zvinowedzera muKubernetes 1.14
Neichi chitsva kuburitswa kweKubernetes 1.14 Windows Server 2019 rutsigiro rwevashandi node nemidziyo zvakawedzerwa.
Nezve izvi Aaron Crickenberger, Senior Test Injiniya kuGoogle akataura zvinotevera:
Kusanganisira Windows seinogona kutakura basa zvinoreva kuti isu taitofanirwa kutsanangura chaizvo zvinoitwa neKubernetes uye isingatsigire mune dzimwe nharaunda.
Ini ndinofunga maficha senge pod kugadzirira masuo uye pod kukoshesa uye sarudzo zvichave zvinobatsira kwazvo mukubvumidza vanhu kurongedza zvemberi zvebasa. Zvimwe zvekushandisa zvinogona kuda nzira chaidzo dzekuratidzira kana vakagadzirira kubata traffic uye mabasa aya anopa izvi kwavari.
Kune rumwe rutivi tinogona kuona kuti Kubernetes 1.14 inouya nerutsigiro rwekunze-kwemuti-miti neAzure-CNI, OVN-Kubernetes uye Flannel, Basa rinoramba richisanganisira Calico nevamwe vanozivikanwa vanopa network
Tsigiro yakagadziridzwawo kune pods, mhando dzebasa, vatariri vebasa, uye metric / quotas kugadzirisa zvirinani mashandiro anopiwa nemidziyo yeLinux.
Pod kukoshesa inobvumira iyo Kubernetes scheduler kuronga basa nekutanga uye kubvisa madiki madhodhi kana zvichidikanwa.
Kugadzirira kwePod Masuo Ekutanga anotangisa yekuwedzera poindi yekunze mhinduro pane pod kugadzirira.
Kuburitswa uku kunopa kuomarara kwekumisikidza kweRBAC yekuwana masumbu echisungo.
Kana iwe uchida kuziva zvishoma zvishoma nezve ichi chitsva kuburitswa, pamwe nekutora nekushandisa iyi nyowani vhezheni. Unogona kushanyira chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Kubernetes 1.14 inosvika iine yekuwedzera kutsigira Windows midziyo